Semalt Expert: SEO sy ny fomba fiasa
Ny orinasa rehetra dia mitaky tranonkala e-commerce hanatsarana ny kalitaon'ny raharahany. Amin'ny fampiasana dikan-tserasera , ny orinasa dia afaka manangana tranokala e-commerce mba hampitomboana ny varotra. E-varotra dia afaka manamboatra tranokala an-tapitrisany avy amin'ny toerana samihafa manerana ny tranonkala. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ireo mpandika tranonkala mampiasa endri-dizitaly dia miankina amin'ny toe-javatra toy ny Social Media Marketing sy ny marketing ao amin'ny votoatiny. Amin'ireo tranga rehetra ireo, ireo mpampiasa tranonkala dia mampiasa fampiroboroboana dizitaly sy fahaiza-manao hafa izay mametraka marika hita amin'ny mpanjifany mampiasa ny aterineto - gida takviyesi.
Search Engine Optimization (SEO) dia tetikasam-pamokarana nomerika amin'ny alàlan'ny tranokala eo amin'ny sehatry ny fikarohana. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, SEO dia mandrindra tranokalan'ny serasera amin'ny pejy manokana. Mandray soa ny mpampiasa rehefa manindry ny URL ao amin'ny tranonkalany amin'ny olon-kafa karazana fikarohana amin'ny alalan'ny laharana ambony. Ny sasany amin'ireo fomba an-dalam-pandaharana hahatonga ny toerana misy anao ho laharana ambony dia azo jerena ao amin'ity torolalana nomen'i Ivan Konovalov, Semalt Digital Services. Azonao atao ny mamela ny tranokalanao hahomby amin'ny tanjonao an-tserasera.
Ny SEO dia mitaky ny mpampiasa mamorona votoaty mampiasa teny fanalahidy. Ireo teny manan-danja manokana ireo dia tokony ho teny na andian-teny izay manana dingana goavam-be ary koa fifaninanana malemy ao anatin'io nikela manokana io..Ny votoatiny dia afaka manatsara ny fomba ahafahan'ny tranonkala handroso amin'ny ho avy. Ny sasantsasany amin'ireo fitaovana izay afaka manao fikarohana amin'ny teny natoraly dia mety ahitana ny SEMRush na ny fitaovana Moz. Ny manam-pahaizana sasantsasany dia manoro ny fampiasana Google Analytics amin'ny famoahana ny virosiny. Ny fitaovana rehetra dia afaka manolotra tombontsoa sasany ho an'ilay olona mampiasa izany ho an'ny tanjona voafaritra.
Ny famoronana votoaty
Ny tranonkala dia ahitana votoaty hitan'ny mpampiasa azy. Izany no mahatonga ny votoatin'ny tranokalanao. Ny famoronana votoaty tsara ho an'ny laharan'ny sehatry ny tranonkala dia mety ho fepetra mahasoa ao amin'ny fampielezan-tsarinao mediam-bola. Ohatra, mamorona votoaty izay afaka mampiditra ny mpampiasa mandritra ny fotoana fohy. Ny fanolorana mpilatsaka an-tsitrapo maimaim-poana dia afaka mamonjy ireo fifandonana maro izay tonga amin'ny famoronana votoaty ho an'ny tranonkalanao.
Backlinks dia lafiny manan-danja amin'ny fanaovana ny tranokalan-tserasera azonao hahazoany fahefana. Ireo tranonkala dia mitady lisitry ny rohy hafa avy amin'ny sehatra hafa mba hahazoana antoka fa manana ny fahefana ao amin'ny toeram-ponenany ny tranonkala. Ohatra, tranonkala ahazoana rindranasa maro avy amin'ny tranokala hafa ao anatin'io lasitra io dia mety hahatsapa ny fahatsapana ambony kokoa amin'ny olona iray misy rohy vitsy. Ireo orinasa manana fahombiazana dia mampiasa backlinks mba hahombiazan'ny tranonkalan'ny SEO . Misy fikambanana tsy mitady tombom-barotra sasany manome loharano avo lenta rehefa omena azy ireo ianao.
SEO dia lafiny manan-danja amin'ny marketing dizitaly. Ny orinasa mahomby dia miankina amin'ny SEO hampitombo ny fahitana ny marika amin'ny mpanjifa. Amin'ny toe-javatra hafa, ny fomba fanao SEO mahomby dia mahatonga ny tranonkala haka an-tserasera ny mpanjifa ao amin'ny tranonkala. Ankoatra izany, sasantsasany amin'ny webmasters mahomby dia manoro torolàlana manaraka ny tetik'ady SEO mba hanatsarana ny fahombiazan'izy ireo. Azonao atao ny manatanteraka ny fampielezan-tserasera nomerika manaraka ny sasany amin'ireto fepetra ireto.